4 Seconds ama Bust | Martech Zone
Arbacada, Nofeembar 8, 2006 Jimco, Oktoobar 24, 2014 Douglas Karr
Xusuusnow maalmaha aad sariirta tagayso iyadoo modemkaagu hoos u dhacayo oo ay weheliso soo degsashada bogagga si aad u daawato subaxa dambe? Waxaan qiyaasayaa in maalmahaas ay aad nooga dambeeyaan. John Chow ayaa qoraal ku dhajiyay daraasaddan oo uu soo saaray Jupiter oo sheegaysa in inta badan dadka wax iibsada ee internetka ay damaanad qaadi doonaan haddii boggaagu uusan ku shuban 4 ilbiriqsi ama wax ka yar.
Iyadoo lagu saleynayo jawaab celinta 1,058 dukaameeysatada internetka ee la wareystay qeybtii hore ee 2006, JupiterResearch wuxuu bixiyaa falanqaynta soo socota:
Cawaaqib xumada ka jirta dukaanka internetka ee boggooda ay ku yartahay qaab-wanaaggu waxaa ka mid ah niyad wanaagii yaraaday, garashada sumadda xun, iyo, tan ugu muhiimsan, luminta weyn ee iibka guud.
Daacadnimada dukaameysiga internetka waxay ku xiran tahay bogga deg degga ah, gaar ahaan kuwa wax iibsada ee qarashka badan iyo kuwa leh mudada dheer.
JupiterResearch wuxuu kugula talinayaa tafaariiqleyda inay sameeyaan dadaal kasta oo ay ku sii hayaan bogga ha u badnaan afar ilbiriqsi
Natiijooyinka dheeraadka ah ee ku jira warbixinta waxay muujinayaan in ka badan saddex-meelood meel ka mid ah dadka wax iibsada ee leh khibrad liidata ay ka tageen goobta gebi ahaanba, halka boqolkiiba 75 ay u badan tahay inaysan mar kale ka adeegan goobtaas. Natiijooyinkaani waxay muujinayaan in degel websaydh liita uu dhaawici karo sumcadda shirkadda; sida ku xusan baaritaanka, ku dhowaad 30 boqolkiiba macaamiisha aan ku qanacsaneyn ama waxay horumarin doonaan fikrad xun ee shirkadda ama waxay u sheegi doonaan asxaabtooda iyo qoyskooda wixii ku saabsan khibrada.
Tani waxay noqon kartaa 'qaanuun weyn' oo codsi kasta ah. 4 ilbiriqsiyo ayaa laga yaabaa inay noqdaan marin weyn - marka laga reebo xogta tirada badan iyo isku dhafka xogta ballaaran, 4 bogga labaad ayaa laga yaabaa inuu rabo inuu noqdo waqtigaaga ugu badan ee culeyska ee bogga kahor intaadan go'aansan inaad hagaajiso ama jarto shaqeynta.
Haddii aad tahay macmiil, tani waxay sidoo kale noqon kartaa rajo aad rabto inaad la dejiso iibiyahaaga. Ma hubo in qaanuunka lagu dhaqi karo daafaha tooska ah, laakiin waxaan si kalsooni leh ugu kalsoonahay in samir la'aantu ay tahay dulqaad la'aan, ha ahaato dukaanka internetka ama dalabka internetka.
Tags: 4 ilbiriqsifiiro gaar ahku qanacsanaanta macaamilkae-commerceecommerceluminta iibkatafaariiqda internetkasumcaddukaankadaacad dukaanka